Tallooyin Muhiim Ah Caafimaadkaada Haboona Inaad Ka Dhigato Nolol Maalmeedkaada Sida… - iftineducation.com
Tallooyin Muhiim Ah Caafimaadkaada Haboona Inaad Ka Dhigato Nolol Maalmeedkaada Sida…
iftineducation.com – Waxa ay noqotay wax caada ah dalka Japan maanta inay dadku biya badan u cabaan si toos ah markay hurdada ka kacaan aroortii iyada oo ay calooshoodu madhan tahay.
Taas oo ku timid iyada oo ay ogaatay jamciyad caafimaadka ku hawlan oo dalkaas ku taal.
Guusha ayaa ah in biyaha lagu daawayno karo xanuuna badan oo aan laga bogsan oo khatar ah iyo sidoo kale kuwo meel hexaad ahba. Xanuunada aan hoos ku soo qorayno ayaa daawayntanuna tahay mid lagu guulaysanayo 100%, kuwaas oo kala ah:
Madax wareerka, xanuunka jidhka, xanuunada wadnaha, infection ka xaglaha, Darbadaha xawliga wadnaha, suuxista, buurida xad dhaafka ah, TP- da, xiiqda, infection ka mareenada, meningitis ka, xanuunka kelyaha iyo mareenka kaadida, hungaacada, infection ka caloosha, Shubanka, bawaasiirta, sonkoriga, calool fadhiga, dhamaan xanuunada indhaha, xanuunada ilmagaleenka, kudka, dhibta dhiiga dumarka, xanuunada dhegaha iyo sanka iyo hungriga.
6 – Asluubtan daawaynta ah ee aan kor ku cadaynay waxay ay bogsiinaysaa bukaanka qaba xanuunadaa aan soo sheegnay hadii Allaah tacaalaa u idmo, Dadka se aan qabin xanuunadaa Allaah ha ka hayo oo ha siiyo Nolol Caafimaad ah oo wanaagsan Inshaa Allaah
Tirada Maalmaha la qaadanaayo isdaawayntan Xanuun walba gaarkiisa
1- Dhiig karka sareeya- 30 maalmood
2- Xanuunada caloosha iyo dacarta- 10 maalmood
3- Xanuunka sonkoriga- 30 maalmood
4- Calool fadhiga- 10 maalmood
5- Xanuunka kudka- 180 maalmood
6- Xanuunka TP da- 90 maalmood
7- Bukaanka qaba Infection ka xaglaha waxa ku waajib ah inay raacaan .
Isdaawayntaa aan kor ku xusnay todobaadka koowaad 3 maalmood oo keli ah, dabadeedna maalin walba wixii laga bilaabo todobaadka labaad
Hadaba Asluubtan isdaawaynta ah ee aan kor ku xusnay malaha wax dhibaato ah oo dhinac kale ah (side effect) iyada oo ay sidaas tahay baad bilowga waxad la kulmaysaa in aad marar badan kaadido.
Wax dhib ahna taas kuma jirto. Waxana haboon inaan ku socono isdaawayntan oo aan ka dhigno waajib caado inoo ah olosheena.
U caadayso cabida biyaha si is daba joog ah, oo ku noolow caafimaad iyo jidh bedqaba iyo firfircoonaan!
Waxay u muuqataa arintanu inay aad u caqli gal tahay, dadka China iyo Japan waxay ku cabaan shaah kulul markay cuntadooda cunayaan. Markaa waxa laga yaabaa inuu maanta waqtigu ku haboon yahay in aan raacno habkaa ay u cunaan cuntada! Waxba kuma khasaaraysid balse waxbaad ka kasban.
Dadka jecel in ay cabaan biya qabow marka ay wax cnuaan, u fiirsada arintan hoos ku qoran!
Waxa ay noqon kartaa wax macaan inuu qofku cabo, hal ama laba koob oo biya ah qabow markuu uu wax cuno.
Si kastabana arintu ha ahaatee biyaha qaboobi waxay fadhiisiyaan oo ay ka dhigaan Solid (adag) oo is haysta maadooyinka saliida ah ee aad hada cuntay. Waxayna gaabis ka dhigaan arinta raqidinta, marka uu la kulmo acid ka ay calooshu soo daynaysona wuu jajabiyaa oo googo’aa, waxana nuugaaya xiidmaha si ka dheer sida ay u nuugaan cuntada solid ka ah ee kale.
Dabadeena, waxay fadhiisanayaan xiidmaha, mudo yar ka dibna waxay isu bedelayaan dufan. Waxayna horseedaysaa taasi oo keeni karta cudurka kudka (Cancer) Allaah haynaga hayee. Markaa waxaa haboon inaad cabto shurbad kulul ama biya diiran markaad wax cunto ka dib.
Essa Mohamoud Aadam
Daawo Video Gaan Sida Cajabta Badan Ee Looga Maseer Siinaayo Naagahaan
Naagtii Dunida Ugu Dheereed oo Geeriyootay ( SAWIRO )